Siyakwamukela kuwebhusayithi yethu.
Umcamelo & Umcamelo
I-Satin iyindwangu, ebizwa nangokuthi i-sateen.
Kunezinhlobo eziningi ze-satin, ezingahlukaniswa zibe i-warp satin ne-weft satin; Ngokwenani lemijikelezo yezicubu, ingabuye ihlukaniswe ngama-satin amahlanu, ama-satin ayisikhombisa nama-satin ayisishiyagalombili; Ngokusho kwe-jacquard noma cha, ingahlukaniswa ibe yi-satin ecacile nedamaski. I-Plain Satin ivamise uku...
Umcamelo, iyithuluzi lokulala.
Umcamelo, iyithuluzi lokulala. Ngokuvamile kunenkolelo yokuthi umcamelo uyisigcwalisi esisetshenziswa abantu ukuze bathole induduzo yokulala. Kusukela ocwaningweni lwesimanje lwezokwelapha, umgogodla womuntu, osuka phambili uwumugqa oqondile, kodwa umbono oseceleni uyijika elinamagobe amane okuphila. Ukuze uvikele i-physiolog evamile...
1, okokulala (ngaphandle kwama-cores), imvamisa yokuhlanza ingasuselwa emikhubeni yenhlanzeko yomuntu siqu. Ngaphambi kokuqala ukusetshenziswa, ungakwazi hashaza emanzini kanye ukugeza ebusweni uginindela futhi ukuphrinta umbala ezintantayo, kuyoba ethambile ukusebenzisa futhi mancane amathuba okuba fade lapho uhlanza esikhathini esizayo. 2,...
I-Satin iyindwangu, ebizwa nangokuthi ...
Iyunithi 03-04, Floor 8, No. 6, Yonghe Road, Wuxi, Jiangsu, China
Sishayele Manje: 0086-13861856109